Ahoana no fomba filalaovana mafy hahazoana: taktika 8 tsy hamono azy ireo - Fifandraisana
Ahoana no filalaovana mafy hahazoana: taktika 8 tsy hamono azy ireo
'Raiso am-po izy ireo, tazomy izy ireo.'
Efa an-taonany maro ny torohevitra mampiaraka toa izao, fa ahoana kosa ny fomba anaovanao izany nefa tsy hoe… ratsy fotsiny?
ahoana no atao hoe sipa tsara
Inona no fomba tsara hanosehana azy ireo, ary rahoviana izy ireo no milavo lefona ary tsy manenjika intsony?
Ny filalaovana mafy hahazoana dia feno nuansa sy fahaiza-manao ary tsy mora foana ny miala, ka izany no antony nametrahanay ireo toro-hevitra 8 ambony hitazomana azy ireo hanenjika…
1. Ataovy milalao foana izany.
Ny teboka iray manontolo an'ny mitendry sarotra ny mahazo dia samy miala voly ianao sy ny olon-tianao mitendry lalao kely.
SY milalao natao ho maivana!
Ataovy somary maloto izy, mandefasa hafatra mahafatifaty na emojis ary hadalana miaraka aminy.
Afaka mandefa lahatsoratra maneso kely ianao. Angamba alefaso ny sarin'ny akanjo mahafatifaty izay hotafinao amin'ny datinao manaraka ary avelao izy ireo hanantena ny hahita anao ao.
Na izany aza misafidy ny hanao izany ianao, dia alao antoka fa hahafinaritra anao roa.
Azo antoka, azonao atao ny maneso azy ireo na manidina kely azy ireo, fa alao antoka fa tsy mandratra ny fihetseham-pony eny an-dalana ianao!
Tokony avela izy ireo te bebe kokoa amin'ny fotoanao sy ny sainao, tsia mila izany.
2. Ataovy ho lohalaharana ny tenanao.
Ity dia zavatra iray izay tena hanampy anao eo am-pitiavana, fa afaka manampy koa azy ireo .
Raha manana drafitra miaraka amin'ny namanao ianao ary tsy te-ho eo amin'ny telefaonao dia lazao azy ireo.
Alefaso hafatra amin'ny hafatrao ny tianao holazaina fa nahazo zavatra nahafinaritra nitranga ianao ka tsy ho ao anaty findainao mandritra ny ora roa.
Mampiseho azy ireo fa nahazo fiainana ara-tsosialy ianao mihoatra ny fandefasana hafatra an-tsoratra azy ireo fotsiny, izay hahatonga anao hanintona kokoa.
Izy io dia fampahatsiahivana ho an'ny ianareo fa tsy mila misy foana ianao (zavatra melohin'ny ankamaroantsika mandritra ny andro voalohan'ny fiarahana!), ary ampahafantaro azy ireo izay antenaina handroso.
Fomba tsara hitazomana azy ireo ho faly rehefa manao SMS avy eo, ary mametraka ny fanantenana ho anao roa fa tsy ianao no karazan'olona miandry amin'ny findainao tontolo andro!
3. Soraty ny fari-tanin'izy ireo.
Ka ny lakileny eto dia ny mahita fifandanjana eo amin'ny fihazonana azy ireo hampialana voly sy fihazonana azy ireo haminavina.
Ilaina ny refesina ny zavatra tsapan'izy ireo sy ny zavatra antenain'izy ireo alohan'ny hilalaovanao ity lalao ity!
Mety ho hitanao fa ho sosotra na ho sosotra marina izy ireo raha tsy mandefa hafatra mandritra ny roa andro ianao.
Raha izany dia miezaha hisoroka an'io satria tsy te handratra ny fahatsapan'izy ireo ianao.
Ataonao izany satria tianao izy ireo ary te hahafantatra azy ireo bebe kokoa.
Mety ho ora vitsivitsy dia ampy hanohizany azy ireo, amin'izay ianao afaka milalao miaraka amin'izany.
tsy manana namana vavy aho
Ny filalaovana mafy hahazoana dia tsy midika hoe manakana tanteraka an'ity olona ity tsy hanana karazana fidirana mankany aminao…
… Midika fotsiny izany fa mitazona azy ireo maniry bebe kokoa ianao - fa tsy ho very maina ny fahatokisany, ny lanjan-tenany, na ny fahalianany aminao!
4. Ataovy mahay mandanjalanja.
Mety ho tena mora ny mieritreritra fa ny filalaovana mafy hahazoana dia midika fa tokony hanao ny ezaka rehetra ilay olona iray hafa.
Azo antoka fa mahafinaritra ny tadiavina sy enjehina, fa tsy raha toa ka miafara amin'ny eritreritra ilay olona iray hafa fa karazana toetranao io!
Raha toa lalao izany ary manohy manao ezaka miaraka amin'izy ireo ianao dia manao tsara.
Raha avelanao hamaky foana izy ireo, hanakatona ny resaka, na hanome azy ireo somary be loatra, dia mety hanomboka hametra-panontaniana amin'ny karazan'olona marina ianao.
Tsy te-hanome ny fiheverana ianao fa tsy ho liana amin'izy ireo mihitsy - tsy misy olona te-hahatsapa toy izany avy amin'ilay olona nampiarahany na tamina fifandraisana.
Raha tokony ho izany, miezaha, manomezà saina azy ireo ary aza manantena azy ireo hanary ny tenany 100% mba hahazoana valiny fotsiny avy aminao.
Tsy ara-drariny eo aminareo roa ary mety hitarika azy ireo hankahala anao amin'izany ary tsy te hiaraka aminao intsony - azo antoka fa tsy ny vokatra namboarina!
5. Milalao mafy ara-batana hahazoana.
Raha te hahalala ny momba anao foana ianao ary te hanangana fihenjanana (ilay karazany tsara!) Eo anelanelanareo roa dia andramo ny mihazona ny fanaovana vatana mandritra ny fotoana fohy.
Tsy midika akory izany hoe tokony hangatsiaka sy hankahala azy ireo ianao, fa azonao atao ny maneso azy ireo kely fotsiny fa tsy miara-matory azy ireo miaraka amin'izay.
Avelao hitombo io fiandrasana io amin'ny alàlan'ny fanomezana oroka maranitra azy ireo amin'ny faran'ny alina, na ampahafantaro azy ireo fa nieritreritra ny hiara-mivavaka amin'izy ireo ianao.
Hanome azy ireo izany fotsiny ampy ny mahatsapa fa liana amin'izy ireo ianao, fa hitazona azy ireo haniry bebe kokoa.
Hanenjika hatrany izy ireo, hahafantatra anao hatrany, ary, amin'ny fotoana hiarahanareo matory, mety ho nifamatotra ianareo noho ny fahafantarana fotsiny ihany.
Ny zavatra madinidinika toy ny fikasihana ny sandriny na ny lohaliny dia afaka mitazona ny hafanana eo anelanelananareo roa raha tsy miaraka matory miaraka ianareo.
Ny fahafinaretana dia mety hahafinaritra ho anao roa, ka milalao miaraka aminy ary jereo izay mahatsapa tsara.
Mazava ho azy, tsy hanenjika anao amin'ny fomba madio izy ireo mba hahafahan'izy ireo manao firaisana aminao, fa mahafinaritra kosa ny mitazona azy ireo ho liana ary miala voly kely miaraka aminy eny an-dalana.
6. Omeo toerana izy ireo malahelo anao.
Raha efa niaraka nandritra ny herinandro vitsivitsy ianao ary te-hilalao somary sarotra hahazoana, dia alao antoka fa mandany fotoana matetika ho anao ianao.
maninona aho no mifikitra amin'ny fifandraisana
Mety ho mora tokoa ny ho tratry ny fanombohana mampiaraka ary hiafara amin'ny fandaniana miaraka amin'ny fotoana rehetra!
Saingy, hitazona azy ireo amin'ny rantsan-tongony sy manenjika anao, ampio halavirana kely ao anaty fifangaroana matetika.
Angamba manaova drafitra amin'ny faran'ny herinandro izay tsy mampiditra azy ireo.
Tsy hoe tsy te hahita azy ireo ianao fa manome fotoana kely fotsiny azy ireo hahatsapa fa aleony miaraka aminao!
Ity fotoana ity dia hisaraka ataovy malahelo anao ry zareo ary te-ho akaiky anao bebe kokoa.
Amin'ny filalaovana mafy hahazoana toy izao dia hanenjika anao izy ireo ary ho faly tokoa hahita anao indray.
Ny elanelam-potoana dia hahatonga anao roa hankasitraka ny fotoana andrasanao Aza mandany fotoana ary hanao izay hahatsapany ho manokana sy masina kokoa.
Fanampin'izany, manome anao rivotra kely izy roa mba hanao ny anao manokana ary hifantoka amin'ny fiainanao manokana - izay tena manan-danja tokoa amin'ny fifandraisana rehetra ary hanampy anao hanorina fototra matanjaka, fa tsy hampidi-doza amin'ny fananganana iray miankina aminy.
7. Aza mitsahatra miasa.
Tian'ny olona ny tsy azony, ka aza matahotra ny handà ny drafitra na hanao ny sasany amin'ny olon-kafa.
Mampihetsi-po tokoa ny manaisotra ny kalandrie ataontsika rehefa miaraka amina olom-baovao isika, ary mifangaro amin'ny fandaniana amin'ny fotoanantsika miaraka aminy.
Raha te hitazona azy ireo ho mailaka sy hilalao fatratra izy ireo, alao antoka fa be atao ianao.
Arakaraka ny mahasarotra anao hihazona na hametaka (ao anaty antony!), Dia vao mainka te hahita anao izy ireo.
Hahatsiaro tena ho miavaka ihany koa izy ireo raha olona iray izay ezahinao ho jerena na dia be atao be aza ianao - rehefa mandoa vola ianao ary mahita fotoana malalaka hahitana azy ireo dia hahatsapa ho manan-danja aminao izy ireo.
Izany dia hanome azy ireo fahatokisan-tena kely ary hahatonga azy ireo hazoto hijery anao hatrany
Na izany na tsy izany, amin'ny alàlan'ny tsy fisianao bebe kokoa dia lasa manintona kokoa azy ireo ianao.
Miomàna ho enjehina…
8. Fantaro ny fotoana tokony hijanonana.
Milalao mafy hahazoana dia tsara daholo rehefa mandeha izany - fa ahoana kosa raha misy vokany mifanohitra aminy?
Mety ho very hevitra ny olona sasany amin'ny toetranao mafana sy mangatsiaka, na mety hahatsapa izy ireo fa milalao lalao be loatra.
Raha mieritreritra ny olon-tianao fa tsy vonona ny hanolo-tena ianao satria manelingelina azy ireo kely fotsiny dia mety hihemotra izy ireo ary hieritreritra fa tsy vonona amin'ny fiarahana ianao.
Tsy tianao ny hieritreretan'izy ireo fa tsy ho afaka mitazona anao amin'ny telefaona mihitsy izy ireo.
Ny ankamaroan'ny olona dia mitady mpiara-miasa azon'izy ireo ianteherana, fa tsy olona iray mandany 3 andro hamaliana lahatsoratra tsotra hoe 'Salama'.
Raha liana ianao, dia ataovy mazava tsara alohan'ny hilalaovana lalao!
raha ianareo mety ho fantany ny sahan'ny nataonao, izy ireo mety hieritreritra fotsiny hoe nanova ny sainao, na tsy mila fifandraisana izay misy fifandraisana ara-batana ohatra.
Ny filalaovana mafy hahazoana dia tokony ho zavatra mahafinaritra sy mahaliana fa tsy fomba iray hanandramanao ny fahatsapan'ny olona momba anao…
Ka, araka ny hita, ny milalao fatratra hahazoana dia lalao sarotra eraky ny hamaky!
Aza adino ny maha-izy anao tena araka izay tratra - tianao ho tian'izy ireo ianao noho ny maha-ianao anao, rehefa dinihina tokoa, tsy fanandramana mody mody mitady ny tetikasa ianao.
Na dia tsara sy mahasalama aza ny fananana drafitra mahatafiditra azy ireo, ary tsy maninona ny manalavitra kely ny tenanao mba hahatonga azy ireo hanenjika anao, alao antoka fa fantatry ny mpanamory anao fa ianao dia tena liana amin'izy ireo.
Ny olona sasany dia hilavo lefona fotsiny fa tsy hiezaka mafy kokoa, ka zahao ny fihetseham-pon'ny olon-tianao, ianaro rehefa nihoatra ny faritaniny ianao, ary miezaha hitazona ny zavatra hahafinaritra sy maivana.
rehefa avelan'ny vadinao ho vehivavy hafa ianao
Mbola tsy azonao antoka hoe inona no fomba tsara hilalaovana mafy? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Ahoana no fomba hiarahabana amin'ny lehilahy / zazavavy: 15 tsy misy toro-hevitra Bullsh * t
Ahoana no fomba hiderana ny tovolahy (+ 40 tsara indrindra ho an'ny lehilahy)
Famantarana 14 momba ny tenim-batana mampiseho lehilahy iray dia mahasarika 100% ho anao
ny fomba hiatrehana ny sakaizan'ny clingy
zavatra tsy ampoizina hatao rehefa mankaleo ianao
ahoana ny fahafantarana ny tovovavy liana
tononkalo ny fahafatesan'ny olon-tiana iray